ဘယ်မြို့ရှေ့ဆက် ၈၄၁ သည်မည်သည့်မြို့နှင့်ကိုက်ညီသနည်း။ သင်ဘာနောက်ဆက်တွဲစိတ်ဝင်စားပါသလဲ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်? 841 Penza ဒေသ (841) xx-xx-xx Penza (8412) x-xx-xx Bessonovka (84140) x-xx-xx Bekovo (84141) x-xx-xx Vadinsk (84142) x-xx-xx Bashmakovo (84143) ) ...
Omsk ရှိ Kazakhstani သံရုံး။ ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်သမီးသည် Samara B-Chernihiv ဒေသတွင်နေထိုင်ပြီးကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏မွေးစာရင်းနှင့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပါရန်ဆုတောင်းပေးသည်။
beeline-moscow ဆက်သွယ်ရေးနဂါးငွေ့တန်း ၂၀၀၇ sms အတွက်ကျွန်ုပ်၏အကောက်ခွန်ကို ၁၀ ဒေါ်လာ ပေး၍ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုပိုမိုသက်သာခွင့်ပေးမည့် 2007 ကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။ ၁။ Beeline အကောက်ခွန်အစီအစဉ်များ - အဆင်ပြေသောအကောက်ခွန်အသစ်များ ... sim10.rushop / beeline / tariffs / 0611 ။ အသက်သာဆုံးနှုန်းထားများ ...
အင်တာနက်၏ megabytes အတွက် mts ရှိအချက်များကိုမည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း။ MTS အချက်များအားအင်တာနက်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုရွေးချယ်မှု ၅၀ မက်ဂါဘီ (50MB) အတွက်အင်တာနက်ဖလှယ်နည်း။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည့်အပိုဆုကြေးအရေအတွက်မှာ ၁၅၀ ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကုဒ် ...
iota ကနေငွေလွှဲလို့ရမလား။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုငွေလွှဲ။ မရပါ။ yota ဖြင့်ပေးဆပ်။ မရပါ။ အမှားအားဖြင့်သင်ငွေထည့်ပြီးဘုရားသခင်ကတားမြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ပြန်ပို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လတ်ဗီးယားသို့ဖုန်းခေါ်နည်း +371 ** *** *** လတ်ဗီးယားရှိမိုဘိုင်းနံပါတ်များသည်ဂဏန်း ၈ လုံးပါ ၀ င်သည်။ ပထမနှစ်ခု၊ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာကုဒ်၊ နောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ် ၆ လက်ကိုင်ကွန်ယက်မိုဘိုင်းကွန်ယက် NMT8 မိုဘိုင်း ...
Prostokvashino ရွာဘယ်မှာလဲ။ ကာတွန်းမဟုတ်ပေမယ့်ရုရှား၊ နိဇ်နဂလိုဂရိုရီးယား၊ Prostokvashino ကျေးရွာ - Tandda၊ ရုရှား၊ Nizhny Novgorod ဒေသ၊ Tonkin ခရိုင်၊
လူများ !!! မည်သည့်အော်ပရေတာကုဒ်နံပါတ် ၃၅၁ နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်ကိုမည်သူသိသနည်း။
လူများ !!! မည်သည့်အော်ပရေတာကုဒ်နံပါတ်သည် ၃၅၁ ဖြစ်ပြီးမည်သည့်ဒေသတွင်တည်ရှိသည်ကိုသိသည်။ Chelyabinsk ဤနေရာတွင်မပြည့်စုံသောအရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုမေးမြန်းလျှင်ဘာဖြစ်မည်ကိုသင်ကြည့်ပါ။ %:%: »%;! 351 ()%; နံပါတ်ကဘာလဲ ??? ? ကုဒ် + ၇ ...
494 သည်မည်သည့်မြို့၏ကုဒ်ဖြစ်ကြောင်းသိသနည်း။ Kostroma (ရုရှား) Kursk Fixed line - Kostroma ဒေသ (8 494) Fixed line - Antropovo (8 49430) Fixed line - Bogovarovo (8 49451) Fixed line - Bui ...
Yota SIM ကဒ်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ ဆက်သွယ်ရေး၊ အင်တာနက်စသဖြင့်ဒီအော်ပရေတာအတွက်စျေးနှုန်းကဘာလဲ။ p ၃၀၀ သို့သော် Beeline ၏ postpaid အခကြေးငွေအားလုံးနှင့်အတူအားလုံးသည်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။ သူတီထွင်မထားဘူး ...
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ငါ့ကိုအဓိကဂုဏ်သတ္တိများစံ .1 ပြောပြပါ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြားခြားနားချက်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင်၊ “ မှတ်ပုံတင်ခြင်း” နှင့်“ မှတ်ပုံတင်ခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရများကိုအဓိပ္ပာယ်တူအသုံးပြုသည်။ သို့သော်တရားဝင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊
စိန့်ပီတာစဘတ်တွင်နေထိုင်သောသူများအတွက်မေးခွန်း။ လိပ်စာတွင်“ lit. ”,“ pom” သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
စိန့်ပီတာစဘတ်တွင်နေထိုင်သောသူများအတွက်မေးခွန်း။ လိပ်စာတွင် "lit. ", "pom ။ " ဘာကိုဆိုလိုသလဲ lit-litera, pom-room နည်းပညာစာရင်းအင်းအဖွဲ့အစည်းများ (OTI) မှအိမ်ခြံမြေအတွက်စာရင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသောအက္ခရာနံပါတ်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။
မော်စကိုတွင်ရှိသောစာတိုက်၏လိပ်စာ ၁၂၅၉၉၃၊ မော်စကို၊ လင်နင်ဂရက်စကီး၊ ၃၇၊ A-125993 GSP-125993 လိပ်စာပြောပြပါ။ Mospochta ၏ဆိုဒ်သည်လက်ရှိအညွှန်းကိန်း၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းပယ်သည်! မြင်ဖို့လွယ်တယ် ...
8805 ******* ဘယ်အော်ပရေတာနဲ့မြို့လား။ ကုဒ် (8) 805 ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ခေါ်ဆိုမှု။ ကုဒ်နံပါတ် / Range / စွမ်းဆောင်နိုင်မှု / အော်ပရေတာ / တာဝေးပစ်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအတွက်နယ်မြေ 8051000000100999910000 RostelecomMoscow 8051010000101999910000RostelecomRussian Federation 8051100000110999910000CountryComMoscow
906 ဒီဟာကဘယ်နယ်မြေလဲ။ မင်းကမင်းမိုဘိုင်းအကြောင်းပြောရင်၊ ဒါက beeline ပဲ။ ငါ့ကိုမပြောဘူး။ Orel ရှိမတူညီတဲ့ဒေသတွေမှာဒီလိုဖုန်းတွေရှိတယ်။ +7 (906) xxxxxxx တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အကြောင်းပြောရင်မင်းဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင် ...
Kostroma မြို့၏စာတိုက်သင်္ကေတကဘာလဲ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်မကြည့်ပါနှင့် Kostroma ဒေသရှိ POSTAL CODES Kostroma မြို့ ... Magistralnaya လမ်း - 156010Mira လမ်း - 156019Maliy per - 156002 Miroslavskaya လမ်း - 156012Malyshkovo 371 km p - ...
4G သည်ဆင်းမ်ကဒ်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသလား။ နေကအများကြီးပိုလွယ်တယ်။ သင်၏ SIZE ရှိသင်၏ SIM ကဒ်သည်ဖုန်းအသစ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ sVs များကိုပြောင်းလဲသင့်သည်။ အနီးဆုံးအလှပြင်ဆိုင်သို့ SIM ကဒ်ပြောင်းပါကနံပါတ်တူလိမ့်မည်။
ဖိုင် extension ကိုဘာလဲ thumbdata3-1763508120 ။ ဖုန်းကနေရာအားလုံးကိုယူတယ်။
ဖိုင် extension ကိုဘာလဲ thumbdata3-1763508120 ။ ဖုန်းကနေရာအားလုံးကိုယူတယ်။ .THUMBDATA3 ဖိုင်အမျိုးအစားအတွက်ဘာလဲ။ .thumbdata3-10 ကျပန်းဂဏန်းပုံစံ၏ extension သည် operator တွင်အသုံးပြုသော service extension တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖုန်း ၈၉၃၃၊ ဘယ်မြို့လဲ။ ဒါကမြို့မဟုတ်ပါဘူး၊ Megafon ရဲ့မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ။ Omsk Altai or Tomsk ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဒေသများရှိမြို့ကြီးများနှင့်အော်ပရေတာများ၏တယ်လီဖုန်းကုဒ်များအကြောင်း telcode.su ဤသည်မိုဘိုင်း ...
ကာဇတ်စတန်မှရုရှားသို့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အမြတ်အစွန်းမြန်သောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးမှ ၁၁ တန် (အိမ်နီးချင်းများ) သို့ခေါ်ဆိုသည်။ 11 ကို tenge သည်။ ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ လမှစ၍ ငါပြောခဲ့တာက ...
81 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,913 စက္ကန့်ကျော် Generate ။